လုပ္ငန္းခြင္ တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ အမွား(၇)ခု - For her Myanmar
ဒီေနရာကေန ဆက္မတက္ေတာ့ဘူးျဖစ္ေနတဲ့ ေယာင္းတို႕ဖတ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္
ေယာင္းတို႔ ေန႕စဥ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့ အရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ပုံမွန္လြဲမွားသြားတဲ့ အမွားေလးေတြကေန ဘဝတိုးတက္မႈကို ရပ္တန္႕သြားေစတဲ့အထိ ေႏွာင့္ယွက္ေနတတ္တာမ်ိဳးပါ။ ဒီလိုအမွားေလးေတြက မသိလိုက္ဖာသာလုပ္မိလိုက္ေပမဲ့ ေယာင္းတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ဆက္လက္တိုးတက္မႈကို ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ေစနိုင္တာမို႕ ျဖစ္တတ္တဲ့အမွားေလးေတြကို ေယာင္းတို႕ေရွာင္ၾကဥ္နိုင္ေအာင္ ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။
ေယာင္းတို႕က ကိစၥတစ္ခုကို လုပ္နိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ယုံၾကည္မႈရွိရွိနဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ကတိေပးလိုက္ေပမဲ့ မထင္မွတ္ထားတဲ့ျပႆနာေတြျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေျပာထားသလို မျဖစ္လာတာမ်ိဳးေတြ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ အာမခံထားသလို ျဖစ္မလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အလုပ္မွာယုံၾကည္မႈေတြဆုံးရႈံးၿပီး တိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစနိုင္ပါတယ္။
ေယာင္းတို႕အလုပ္မွာ ေနာက္ထပ္သင္ယူစရာလိုအပ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ရွိရင္းစြဲ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေနတာကလည္း ဆက္လက္တိုးတက္မႈကို ရပ္တန္႕သြားေစနိုင္ပါတယ္။
Related article>>>အရမ္းဂါတဲ့ တနလၤာမွာ ရံုးတက္ပ်င္းေနသူမ်ား ဖတ္သင့္ေသာစာ
လုပ္ေနက်အလုပ္ေတြကုိ ပိုၿပီးဆန္းသစ္တဲ့အိုင္ဒီယာေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္လို႕ရေပမဲ့ လုပ္ေနက်အတိုင္း ရိုးရိုးႀကီးဆက္သြားေနဦးမယ္ ၊ ေျပာင္းလဲဖို႕တြန္႕ဆုတ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ တိုးတက္ဖို႕ၾကန္႕ၾကာေနဦးမွာပါ။
အလုပ္တစ္ခုၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႕ဆိုတာ လူအမ်ားနဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္လို႕ တစ္ကိုယ္တည္းသီးသန္႔ ရပ္တည္ေနတာမ်ိဳးက ဆက္လက္တိုးတက္ဖို႕ကို ဘယ္လိုမွ မေဖာ္ေဆာင္နိုင္ပါဘူး။
လုပ္ငန္းကိစၥေတြကိုျဖစ္ျဖစ္ ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြအေပၚမွာျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းမျမင္တတ္တာကလည္း တိုးတက္ဖို႔လမ္းစကို ပိတ္ဆို႔ေစႏိုင္ပါတယ္။
Related article>>>လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ခြဲေဝေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း (၆) သြယ္
အထက္အရာရွိကေပးထားတဲ့ တာဝန္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ပဲေက်ႁပြန္အာင္ ထမ္းေဆာင္ေနေပမဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ဘာမွတုန္႔ျပန္မႈမရွိဘဲ ေနတတ္တာကလည္း အလုပ္မွာတိုးတက္ဖို႕ ေႏွာင့္ေႏွးေစနိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ အလုပ္ ေရာေထြးတတ္တာ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို အလုပ္ထိသယ္လာၿပီး အလုပ္ကိစၥေတြအေပၚ အာရုံစိုက္မႈေလ်ာ့နည္းတာကလည္း အလုပ္မွာတိုးတက္ဖို႕ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္။
ကဲ…ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ေယာင္းတို႕အလုပ္မွာ တိုးတက္ဖို႕ဘယ္အရာေတြက ေႏွာင့္ယွက္ေနလဲဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိသြားေလာက္ပါၿပီ။ ဘာေတြေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့ဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္ျပန္ဆန္းစစ္ၿပီး အလုပ္မွာတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားနိုင္ၾကပါေစေနာ္။
ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့သာဆိုရင် ဘာကိုမှ ပူစရာမလိုတော့ဘူး
ယောင်းတို့ရေ… ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာပြီဆိုတော့ ခရီးသွားဖို့လည်း ပြင်ဆင်နေကြပြီထင်ပါရဲ့။ ခရီးသွားမယ်ဆိုတာနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကလည်း ကြိုတင်စဉ်းစားပြင်ဆင်ရမယ့် ကိစ္စတွေထဲက တစ်ခုပဲဟုတ်? ပြည်ပဘက်ကို ခရီးသွားမယ့် ယောင်းတွေအတွက်ဆို ကြိုတင်စီစဉ် ပြင်ဆင်စရာက တစ်ပုံတစ်ပင်ပါပဲ။ အဲဒီအတွက် ၂၀၁၉ မှာ အထာကျကျ ခရီးသွားနိုင်ဖို့ UnionPay ရဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေထဲက ထိပ်တန်းနည်းလမ်းကောင်း (၆) ခုကို ယောင်းတို့အတွက်အခုလို မျှဝေပေးထားပါတယ်။
(၁) နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် သွားတဲ့အခါ Debit card (သို့) Credit card (သို့) Prepaid card ဆောင်သွားပါ
နိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံးလုပ်ရတာက ငွေလဲဖို့ တိုင်စပတ်တာပါပဲ။ ဘယ်မှာလဲရမလဲ ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ပေါက်လဲနဲ့ အတော်ကို ကသီပါတယ်။ money changer အလွယ်တကူတွေ့လို့ ဝင်လဲပြန်ရင်လည်း ဈေးနှိမ်ခံရမလား အလိမ်ခံရမလားနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဝင်ရပြန်ရော… ဒီအခါကျရင် အားကိုးရတာက debit card, credit card နဲ့ prepaid card တွေပါ။ ဒီကဒ်တွေကတော့ ဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တိကျမှန်ကန်တဲ့အပြင် ကိုယ်သုံးတဲ့ ပမာဏကို အော်တိုတွက်ချက်ပြီး ဖြတ်တောက်ပေးတာမို့ စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် debit card, credit card နဲ့ prepaid card တွေသာ ရဲရဲကြီးယူသွားလိုက်ပါယောင်းရေ။ UnionPay ကဒ်တွေက နိုင်ငံပေါင်း (၁၇၀) ကျော်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ အဲဒီအတွက် သီးသန့်စီစဉ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
(၂) UnionPay က တစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ဘိုကင်ပြုလုပ်လိုက်ပါ
ဒါကတော့ ဘယ်သွားသွား လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ့် ကိစ္စပါ ယောင်းရေ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ဟိုတယ်အခန်း ၊ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ သွားလာရေးတွေအတွက် ဘိုကင်အရင်တင်ထားမှ ယောင်းတို့ခရီးစဉ် သာယာချောမွေ့နိုင်မှာပါ။ ဘိုကင်တင်တဲ့အခါမှာလည်း အနည်းဆုံး (၂) လ (၃) လလောက် ကြိုတင်ဘိုကင်တင်ထားမှသာ သင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရနိုင်မှာပါ။
UnionPay ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေအတွက်ကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ လေကြောင်းလက်မှတ်တွေ အတွက် discount (လျှော့ဈေး) တွေ ရရှိနိုင်တဲ့အပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လေယာဉ်ကွင်းပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်မှာလည်း airport lounge service တွေကို ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ လက်ရှိပေးနေတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေအကြောင်း ဒီထက်ပိုကြည့်ချင်ရင်တော့ UnionPay ရဲ့Facebook page မှာ ဝင်ကြည့်ကြည့်နော် ယောင်းတို့။
Related article >>> မြန်မာနိုင်ငံက လူသိနည်းနေသေးတဲ့ ကမ်းခြေ (၃)ခု
(၃) UnionPay ရဲ့ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း လက်လွတ်မခံပါနဲ့
ခရီးသွားရုံပဲလား၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်လား၊ ခရီးသွားအာမခံလုပ်ဖို့လား၊ ဈေးဝယ်ထွက်မှာလား ? ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် UnionPay ရဲ့ Premium ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ Conceirge Service ကိုလည်း ၂၄ နာရီလုံး အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မှာပါ။
Conceirge service ဆိုတာကတော့ ယောင်းခရီးစဉ် အစအဆုံး ဗီဇာလျှောက်တာ ၊ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအတွက် လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေကို ရှင်းပြပေးတာ၊ သွားရမယ့် အထင်ကရနေရာတွေကို အကြံပေးတာ၊ ယောင်းအတွက် စကားပြန်ငှားပေးတာစတဲ့ ယောင်းအတွက် လိုအပ်မယ့် အသေးစိတ်မှန်သမျှကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေါ့။ ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီဖုန်းနံပါတ်လေး +662 205 7748 ကို ဆက်သွယ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ယောင်းရေ။
(၄) အထာကျကျ ဈေးဝယ်ထွက်ပါ။
နိုင်ငံခြားခရီးသွားပြီဆိုရင် တော်တော်များများရဲ့ မလုပ်မဖြစ်က ဈေးဝယ်ထွက်တာပါပဲ။ စကားမစပ် UnionPay ကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေက ကျောက်မျက်ရတနာတွေနဲ့ လက်လီပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအများဆုံးဆိုတာ သိပြီးကြပြီလား ယောင်းတို့ ? ဈေးဝယ်ထွက်တာ ပျော်စရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသလောက် လက်ထဲမှာ ငွေလက်ကျန် နည်းနေပြန်ရင်လည်း လျှော့သုံးရပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ပဲ လိုချင်တာလေးတွေကို မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရဖြစ်ခဲ့ရပေါင်းမနည်းပါဘူး…
မပူပါနဲ့ UnionPay ကဒ်ကို အသုံးပြုသူတွေအတွက် များပြားလှတဲ့ discounts တွေနဲ့ အထူးခံစားခွင့်တွေကိုပါ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် Diamond နဲ့ Platinum ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက်ကတော့ ထိပ်တန်းဆိုင်ကောင်းတွေ ၊ ဟော်တယ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ အပြင် အခြား စုစည်းထားတဲ့ U Collection ရဲ့ အထူးခံစားခွင့်တွေကိုပါ နိုင်ငံနှင့်ဒေသပေါင်း ၂ဝကျော်မှာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ U Collection မှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတာကို သိရဖို့ ဒီလင့်ခ်ထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Related article >>> နိုင်ငံခြားသွားလည်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့ အရာ (၆) ခု
(၅) မတော်တဆ ကဒ်ပျောက်ဆုံးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခိုးခံရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဏ်ကို ချက်ခြင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလိုက်ပါ။
ယောင်းတို့ကိုအကြံပေးချင်တာကတော့ ကဒ်လျှောက်ထားတဲ့ ဘဏ်ရဲ့ အရေးပေါ် ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ကဒ်ရဲ့အနောက်မှာ ဖော်ပြထားပြီးသားမို့ ကြိုတင်မှတ်သားထားသင့်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါ ဆက်သွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေနိုင်ပြီပေါ့။
အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုတာ အချိန်မရွေး ရှိနေတတ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကဒ်အခိုးခံရတာ၊ အမှတ်မဲ့အသုံးပြုခံလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆို ဘဏ်တွေကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်လိုက်ပြီး ကဒ်ပိတ်ခိုင်းထားလိုက်တာနဲ့ ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေကို ကြိုတင်တားဆီးနိုင်မှာပါနော်။
(၆) အရေးကြီးဆုံးကတော့ အမှတ်ရစရာ အပျော်တွေ ဖန်တီးခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ ယောင်းရဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ဖို့ပါ။ ခရီးသွားတယ်ဆိုတာက တဝကြီးအပန်းဖြေဖို့ဖြစ်သလို အပျော်ကြီးပျော်ပြီး အကောင်းဆုံးအချိန်လေးတွေဖြစ်ဖို့က အဓိကပဲလေ။ ခရီးတစ်လျှောက် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပါ၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ၊ ပြီးတော့ အမှတ်တရတွေ တစ်ပုံကြီးဖန်တီးခဲ့ပါ ယောင်းရေ။ စိတ်ကို ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် လုံးဝအနှောင့်အယှက် အဖြစ်မခံတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အဆင်မပြေဖြစ်တာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဆို UnionPay က ယောင်းအတွက် အဖြေတစ်ခုပါပဲ။
Related article >>> ခရီးသွားတဲ့အခါ အတွင်းပစ္စည်းတွေကို သေချာထုပ်သိမ်းကြမယ်
ကဲ..ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့လည်း UnionPay ရဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖတ်ပြီး ပြည်ပခရီးသွားရင် ဘာတွေပြင်ဆင်သွားရမလဲ၊ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင် ဘာတွေချက်ချင်းလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ယောင်းတို့အတွက် သာယာချောမွေ့တဲ့ ခရီးစဉ်လေးဖြစ်ပါစေနော်။
Tags: Career, Development, no respond, personal, Promise, work
Yin Sandi Ko March 28, 2019